Vokatry ny atao ihany… | NewsMada
Vokatry ny atao ihany…
Par Taratra sur 02/06/2020
Efa mandray ny vokatry ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Conoravirus isika amin’izao? Iaraha-mahita, misy ny fiovan-javatra: saika mitombo isa isan’andro, ohatra, ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina Coronavirus, misy ireo namoy ny ainy, eo ireo marary ao anatin’ny fahasarotana, eo koa ireo marary sitrana soa aman-tsara… Miara-dalana amin’izany ny fahitana sy ny famokarana ny fanafody sy fanefitra na fampitomboana ny hery fiarovan’ny tena.
Voka-javatra noho ny (n)ataon’ny tena ihany izany rehetra izany. Tsy misy fahagagana na kisendrasendra. Izay, ohatra, no mahatonga ny fisokafana amin’ny fialana miandalana amin’ny fihibohana, ho an’ny faritra Analamanga, ao anatian’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Ho an’ny faritra Matsiatra ambony aza, miverina amin’ny teo aloha ny fiainana andavanandron’ny mponina; eny, na eo aza ny fepetra tsy miantsy arahina ihany amin’izany.
Ho an’ny faritra atsinanana indray, mihamafy sy mihasarotra kokoa ny toe-draharaha amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao. Mitombo hatrany, ohatra, ny isan’ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina Coronavirus, mitombo ny isan’ny marary ao anatin’ny fahasarotana, any avokoa ireo namoy ny ainy. Vokany, mafimafy sy nampitomboana aza ny fepetra amin’ny fihibohana, ny fanaraha-maso ny fanarahana izany, ny fiatrehana mivantana ny ady…
Vokatry ny ataon’ny tena ihany no mahasoa na maharatsy izay iainana, indrindra ny fiatrehana ny ho avy amin’izao tapa-bolana fahadimy ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana izao. Tsy natao hahakivy izany fa mitarika ny tena ho amin’ny fiarovan-tena sy fitsinjovana ny hafa hatrany kokoa. Tena mila fahamatorana sy tsy fanaovana kitoatoa ny fitandremam-pahasalamana amin’izao. Tsy manambana na mitatao fa efa mihatra mamotika ny tena ny aretina.
Raha te handresy hatramin’ny farany ary ho vita haingana ny ady, mila miaritra sy maharitra. Ny ataon’ny tena ihany no mahasoa na maharatsy amin’izao.